१४ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा आइपिएलमा १९ हैट्रिक, कुन-कुन खेलाडीले हैट्रिक लिए त ? - हिमाल दैनिक
१४ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा आइपिएलमा १९ हैट्रिक, कुन-कुन खेलाडीले हैट्रिक लिए त ?
काठमाडौँ २४ चैत्र २०७७, मंगलवार १८:१६
इन्डियन प्रिमियर लिग(आइपिएल)को १४ औं संस्करण सुरु हुन अब केवल ३ दिन बाँकी छ। २० ओभरमा खेलिने यो लिगमा सबैभन्दा मान्यता बल्लरले पाउने गर्छन्। कैयौ बल्लरले यस लिगमा हैट्रिकदेखि खेललाई नै कायापलट गर्दिएका छन्। आइपिएलमा अहिलेसम्म १९ हैट्रिक भएको छ । जसमा अमित मिश्रले सबै भन्दा बढी ३ र युवराज सिंहले २ हैट्रिक लिएकाका छन् ।
१३ औं सिजनसम्म आइपुग्दा कुन कुन खेलाडीले हैट्रिक लिए त ?
सन् २००८ को आइपिएल- ३ हैट्रिक
लक्ष्मीपति बालाजी : इरफान पठान, पीयूष चावला र वीआरवी सिंहलाई आउट गरेका थिए।
अमित मिश्रा : रवि तेजा, प्रज्ञान ओझा, तिलकरत्ने दिलशान र आरपी सिंहलाइ आउट गरेका थिए।
मखाया एंटिनी : सौरव गांगुली, देवब्रत दास र डेविड हसीलालाई आउट गरेको थिए।
आइपिएलमा पहिलो हैट्रिक गर्ने बल्लर लक्ष्मीपति बालाजी हुन्। सन् २००८ देखि सुरु भएको आइपिएलमा बालाजीले किग्स इलेभेन पन्जाबबाट उनले पहिलो हैट्रिक लिएका थिए। यस सिजनमा बालाजी बाहेक अरु दुई हैट्रिक भएको थियो । अमित मिश्रले दिल्लीबाट खेल्दै हैदराबाद डेक्कन चार्जर्सबिरुद्ध हैट्रिक लिएका थिए भने चेन्नई सुप्पर किंग्सबाट खेलेका मखाया एंटिनीले कोलकाता नाइटराइडर्सबिरुद्ध हैट्रिक लिएका थिए।
सन् २००९ को आइपिएल – ३ विकेट
युवराज सिंह : रबिन उथप्पा, देवब्रत दास र डेविड हसीलाई आउट
रोहित शर्मा : अभिषेक नायर, हरभजन सिंह र जेपी डुमिनीलाई आउट
युवराज सिंह : हर्षेल गिब्स, एन्ड्रीयु साइमड्स र वेणुगोपाल रावलाई आउट
युवराज सिंहले आइपिएलको दोश्रो सिजनमा दुई हैट्रिक लिएका थिए। एक सिजनमा दुई हैट्रिक लिने युवराज बिश्वको पहिलो बल्लर हुन्। त्यस्तै यस सिजनमा रोहित शर्माले पनि हैट्रिक लिएका थिए ।पन्जाबबाट खेलेका युवराज रोयल च्यालेन्जर्स र हैदराबाद बिरुद्धको खेलमा लगातार तीन बलमा ३-३ विकेट लिएका थिए । त्यस्तै रोहितले २००९ देखि हैदराबादबाट आइपिएलको सुरुवात गरेका थिए । डेब्यु खेलमा नै उनले मुम्बई इन्डियनसबिरुद्ध हैट्रिक विकेट लिएका थिए।
सन् २०१० आइपिएल- १ हैट्रिक
प्रवीण कुमारले डेमियन मार्टिन, सुमित नरवाल र पारस डोगरालाई पवेलियन पठाएका थिए।
सन् २०१०मा भएको आइपिएमा प्रवीण कुमार रोयल च्यालेन्जर्स बेगलुरुको टीममा थिए । उनले राजस्थान रोयल्सबिरुद्ध हैट्रिक लिएर टीमलाई ९२ रनमा समता थिए । यस पछि बेगलुरुले डैनियल विटोरीको की कप्तानीमा जीत हासिल गरेका थिए। प्रविणको यो सीजन एउटा मात्र हैट्रिक थियो।
सन् २०११ आइपिएल- १ हैट्रिक
अमित मिश्राले रेयान मैक्लॉरेन, मन्दिप सिंह र रेयान हैरिसलाई आउट गरेका थिए।
अमित मिश्राले यस सिजनम लेग स्पिनको जादु देखाएका थिए। यस पटक अमित हैदराबादबाट खेलेका थिए। यस खेलमा हैदराबादले १९९ रनको लक्ष्य दिएको थियो। जसमा किंग्स इलेभेन पन्जाब टीमबिरुद्ध अमितले हैट्रिक समेत ४ विकेट लिएका थिए। जसका कारण पन्जाब टिम ११६ रनमा नै अल आउट भएका थिए।
सन् २०१२ आइलिएलमा- १ हैट्रिक
अजीत चंडीला ले जेसी राइडर, सौरव गांगुली र रबिन उथप्पालाई आउट गरेका थिए।
राहुल द्रविड़को कप्तानीमा राजस्थान रोयल्सको खेल पुणे वारियर्स संग थियो । प्लेअफमा क्वालिफिकेशनका लागि भएको खेलमा आरआरका स्पिनर अजीतले हैट्रिक लिएका थिए। पुणेलाई १७० रनको लक्ष्य दीएको थियो तर त्यसअघि नै टीम अलआउट भएको थियो। तर, यस सीजनपछि चंडीलाले आइपिएलको कुनै पनि खेल खेलेनन। स्पाट फिक्सिगका आरोप पछि उनका करियर समाप्त भएको थियो ।
सन् २०१३ को आइपिएल- २ हैट्रिक
सुनील नरेन ले डेविड हसी, अजहर महमूद र गुरकीरत सिंहलाई आउट गरेका थिए।
अमित मिश्रा ले भुवनेश्वर कुमार, राहुल शर्मा र अशोक डिंडालाई पवेलियन पठाएका थिए।
सन् २०१३ को आइपिएलमा दुई स्पिनर सुनील नरेन र अमितले हैट्रिक लिएका थिए । कोलकाता नाइटराइडर्सबाट खेलेका नरेनले पन्जाब बिरुद्ध हैट्रिक लिएका थिए। तर उनको टिमले भने हार व्यहोर्न पर्यो। त्यस्तै अमितले हैदराबादबारा खेल्दै पुणे वारियर्स बिरुद्ध लगातार ३ बलमा ३ विकेट लिएका थिए।
सन् २०१४ को आइपिएल-२ हैट्रिक
प्रवीण ताबे ले मनीष पाण्डे, यूसुफ पठान र रेयान टेन डेशकाटेलाई आउट गरेका थिए।
शेन वाटसन ले शिखर धवन, मोइजेज हेनरिक्स र कर्ण शर्मा आउट गरेका थिए।
सन् २०१४ को आइपिएलमा दुई हैट्रिक भएको थियो। दुवै हैट्रिक राजस्थान रोयल्सका दुई ब्याट्समेनले लिएका थिए। स्पिनर प्रवीण ताबेके केकेआरबिरुद्ध हैट्रिक लिएर जीतमा अहम भूमिका नभएका थिए भने शेन वाटसनके हैदराबाद बिरुद्ध हैट्रिक लिएका थिए। तर १३४ रनको लक्ष्य दिएको हैदराबादले टारगेट डिफेन्ड गरे। त्यस खेलमा राजस्थान १०२ रनमा अल आउट भएका थिए।
सन् २०१६ को आइपिएल- १ हैट्रिक
अक्षर पटेल ले दिनेश कार्तिक, ड्वेन ब्रावो र रबिन्द्र जडेजालाई पवेलियन पठाए।
अलराउंडर अक्षर पटेल यस सीजनमा हैट्रिक लिने केवल एक खेलाडी हुन्। उनले पंजाबबाट गुजरात लायान्सबिरुद्ध ५ बलमा ४ विकेट लिए जसमा उनले हैट्रिक पनि लिएका थिए । पन्जाबले यो खेलमा जित हात परेको थियो।
सन् २०१७ को आइपिएल-३ हैट्रिक
सैमुअल बद्री ले पार्थिव पटेल, मिचेल मैक्लेनघन र रोहित शर्मालाई आउट गरेका थिए।
एन्ड्रीयु टाई ले अंकित शर्मा, मनोज तिवारी र शार्दूल ठाकुरलाई पवेलियन पठाएका थिए।
जयदेव उनादकट ले बिपुल शर्मा, राशिद खान र भुवनेश्वर कुमारलाई आउट गरेका थिए।
विश्वका नम्बर १ टी-२० बल्लर भनेर चिनिने सैमुअल बद्रीले बेगलुरुबाट खेल्दै हैट्रिक समेत ४ विकेट लिएका थिए। उनको टिमले मुम्बईलाई दिएको १४२ रनको लक्ष्य डिफेन्ड गर्न भने बेङ्गलुरुले सकेन।
त्यस्तै टाईले गुजरात लायन्सबाट खेल्दै राइजिग पुणे सुपरजाएट्सबिरुद्ध हैट्रिक लिएको थियो।जसका कारण लायन्सले यो खेलमा जित हात परेको थियो । टाईले यस खेलमा कुल ५ विकेट लिएको थियो । राइजिग पुणेका जयदेव उनादकटले इस सीजन राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। उनले हैदराबादबिरुद्ध लगातार ३ बलमा ३ विकेट लिएका थिए। जसका कारण पुणेले हैदराबादलाई १२ रनले हराएको थियो। यस सिजन पछि अक्सनमा उनादकट सबै भन्दा महंग खेलाडी भएका थिए।
सन् २०१९ को आइपिएलमा- २ हैट्रिक
सैम करन ले हर्षल पटेल, कागिसो रबाडा र सन्दिप लामिछानेलाई पवेलियन पठाएका थिए।
श्रेयस गोपाल ले विराट कोहली, एबी डिविलियर्स र मार्कस स्टोइनिसको विकेट लिए।
इंगलिस अल राउनडर सैम करनले आइपिएलमा डेब्यु गरेका थिए। पन्जाबबाट खेलेका करनले दिल्ली क्यापिटल्सबिरुद्ध लो स्कोरिंग खेलमा सिजनको पहिलो हैट्रिक लिएका थिए। जसका करन पन्जाबले उक्त खेल जित्यो।
त्यस्तै राजस्थानका लेग स्पिनर श्रेयस गोपालले बेङ्गलुरुबिरुद्ध लगातार ३ बलमा ३ विकेट लिएका थिए। आइपिएलमा हैट्रिक लिने उनि अन्तिम बल्लर थिए। यस अप्ची २०२० मा कुनै पानी बल्लरलेर विकेट लिएको छैन। एजेन्सीको सहयोगमा
अघिल्लोदिपाश्रीको फेसबुक ह्याक गर्ने १४ बर्षिय बालक पक्राउ
पछिल्लोयुरोपियन च्याम्पियन्स लिग: रियलसंग लिभरपुलको लजास्पद हार